somalimidnimo.com » Daawo/Dhageyso Sh. Axmed C/Samad oo Sheekh Umal u Keenay Video/Cod Been-abuur ah oo PIS Puntland ka Diyaarisay Dilkii Sh. Dr. Axmed Xaaji iyo Sh. Umal oo u Adeegsaday Dacaayad sh. Xasaan ka Dhan ah! Qeybta Koowaad.
Daawo/Dhageyso Sh. Axmed C/Samad oo Sheekh Umal u Keenay Video/Cod Been-abuur ah oo PIS Puntland ka Diyaarisay Dilkii Sh. Dr. Axmed Xaaji iyo Sh. Umal oo u Adeegsaday Dacaayad sh. Xasaan ka Dhan ah! Qeybta Koowaad. Jul 31, 2012 - 19 Comments	الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
Alloow sahal amuuraha libaax seexday bay niman salaaxeene! Maalmo ka hor intuusan sheekh Umal bilaabin muxaadarooyinkiisii Khawaarijta ka hadlayey laakiin loogu talogalay sheekh Xasaan iyo Mujaahidiinta waxaa Nairobi soo gaaray sh. Axmed C/Samad, Fu’aad Afloow, iyo wadaaddo kale oo wada cajal video ah ama cod ah oo Ashahaado-la-dirirka Faroole ka duubeen nin lagu sheegay inuu dilay Sheekh Dr Axmed Xaaji (AUN)! Wiilka filimka ka dhex muuqda baa laga sheegay inuu yiri: markaan diiday dilka sheekha baa la ii daaray cajal sheekh Xasaan ku sheegayo in culumada Ictisaamka la dili karo! Inteydaan daawan filim noocaas oo kale ah oo PIS iyo Tigree-raacyo horay u duubeen bal aan is weydiinno:
1- Waa caadi in Puntland iyo Somaliland dhoofiyaan ama jirdilaan maxaabiista! Haddii wiilka filimka ku jira la khasbay; maxaa sheekh Umal u ogolaaday markhaatiga PIS-ta? Miyaan Allaah oran:
Yaa shaki uga jiraa in Ashahaado-la-dirirka Puntland faasiqiin yihiin? Soow sidoo kale Allaah ma oran:
2- Waxaa dhici karta in wiilka laga dalbaday inuu saas u hadlo iyadooy dhici karto in xabsiga laga fududeeyo.
3- Maxaa xarigii Kenya kaddib; sheekh Umal eedeynta sheekha meesha u keenay?
Sidoo kale, weli filimka inteydaan daawan; maalmo kama soo wareegin markii jaraa’idka Kenya iyo BBC-da qeybta Ingiriisku bilaabeen inay eedeeyaan sheekh Xasaan ayaa sh. Shible iyo saaxiibbadiis bilaabeen inay internetka soo gashaan su’aalo la weydiinayo sheekh Xasaan iyadoo la rabo in la tuso gaalada. Su’aalaha ay weydiinayaan sheekhu waxay la mid yihiin kuwa saxaafadda gaaladu qoreyso!
Haddaad Rabtid inaad Aragto Been-abuurka PIS daawado Filimada Hoose?
Marar badan baa la sheegay in wadaaddada qaarkood dhoohan yihiin! Waxaa muuqata in sh. Umal ku dhacay shirqoolkii sheekh Shible! Sheekh Umal wuxuu fatwada ku dhisay waa cod been-abuur ah oo wiilkuu sheegayo ama khasab looga duubay ama waa mid ka mid ah PIS-ta oo iska dhigaya inuu yahay Ash-Shabaab! Bal suureyso haddii sheekh Umal fatwo ku dhiso hal wiil oo labo filim laga duubay?! Mar Qabuurogaleenka iyo PIS ku khasbeen inuu wiil been sheego si uu dhaho inuu Ash-Shabaab yahay! Isla wiilkaas baa qiranaya in lagu khasbay inuu saas yeelo? Ogaada, PIS-ta Faroole waxay internetka soo gasheen inay qabteen nin ka tirsan Shabaabka oo sheegeen inuu ka dhinac dagaalayo qabiilka Leelkase? Cajal filim iyo cod kaas oo kale ah baa sh. Axmed C/Samad dhageysiiyey sh. Umal dabeedna sheekh Umal waa iska eedeeyey sheekh Xasaan?
Waxaa markaas Nairobi jooga, sheekh C/Raxmaan sheekh Cumar oo ahaa ninkii safiirkii Maraykanka u fadhin jiray Kenya geeyey masaajid ku yaal Marayka, ina Ileyna ku soo dhoweeyey Minnesota, USA! Sidoo kale waxaa codka keenay sh. Axmed C/Samad oo ku jiray wadaaddadii ina Iley ugu qabtay Mu’tamarka Jigjiga? Sh. Axmed C/Samad wuxuu la shaqeystaa Faroole iyo Ina Iley! Keligiis maaha ee Ictisaamka Puntland intooda badan baa ku xiran.
Marka qofkaan Youtube u furmeyn ha dhageysto codka hore ee MP3 markii PIS Faroole ku khasbeen wiilka inuu Shabaab yahay. Codka kalana waa markii Leelkasuhu waraysteen isla wiilka oo sheegay in la khasbay! Suureyso sheekh Umal oo codkaas kore oo kale oo la maqashiiyey wax ku dhisay? Maqal keliya maahee xitaa muuqaal buu wataa! Marka wakuwaas culumadii Ictisaam wax ku dhisaya codka laga soo duubay maxaabiis la jir dilay?
Xaggee kaga taal Islaam in xukun waxaas lagu dhiso! SUBXAANALAAH! Soow ma maqashaan sheekh Umal oo niman culumo ah u diiddan inay ka hadlaan Islaamka! Soow meydaan arag iyagoo leh GoB Islaam waa majhuul! Haddaan majhuul nahay; goormaa la soo qaadan jiray codadka wiilal lagu cadaabayo xabsiyo ama lacag la siiyey si ay been-abuur u sameeyaan? Ma caddaalada codka sheekh Umal maqley buu tazkiyo u hayaa? Ma fileynno xitaa inuu yaqaan wiilashaas!
Inteynnaan u gelin maqalka iyo muuqaalka wiilkaas labada jeer kala hadlaya ee PIS khasabtay dhageysta cod seddex daqiiqo ah oo sheekh Umal ku eedeynayo sheekh Xasaan oo ka hadlaya wiilka la khasbay ama lacagta qaatay:
Guji/riix si aad u dhageysato sheekh Umal oo fatwo ku dhisay hadalka PISta oo MP3 ah!
Dhegeysta oo daawada codadka wiilkaas la khasbay.
Guji/riix codka filimka koowaad oo MP3ah.
Guji/riix codka filimka labaad oo MP3ah
Suureysta sheekh Umal oo wax ku dhisay cod PIS soo dhiibeen si sumcadda looga dilo sheekh Xasaan? Marka sheekh Xasaan wuxuu soo faagay arrimihii sheekh Umal! Waxaana guushii helay sheekh Xasaan oo meeshiisa taagan! Inteynnaan u gelin arrinta sheekh Xasaan; waxaan berri idin maqashiinnaynnaa qaar ka mid ah fatwooyinkii kululaa ee sheekh Umal bixiyey? Sheekh Umal waxaa ku dhacay qisadan oo ku qorneyd buugaagta Afsoomaaliga dugsiyada hoose dhexe baan fileynnaa? Amaba dugsiga sare:
Nin la oran jiray Il-dab oo reer qansax ahaa baa iyadoo nabad lagu wada deggen yahay reer qurac nin ka dilay! Odayaashii reer Qansax waxay go’aan ku gaareen hadday colaad aan la fileyn dhacday waa in la guuro! Waxaa la guuray intaas oo geeddi iyadoon la nasan! Ninkii Ildab ahaa baa barqadii dambe iyadoo qorraxdu kulushahay yiri: war hala dego? Oday ka mid ah odayaashii reer Qansax baa yiri: dabku waa kaad shiddee adkeyso?
Marka sheekh Umal isagaa madaxna ka ahaa Itixaadka Soomaali Galbeed oo Jihaad sheegan jiray, fatwooyinkaad maqli doontaanna horay u bixiyey? Marka berri baan arki doonnaa hadday jirto fatwo ka kulul midda sheekh Umal insha Allaahu.
F.G. Codka sh. Umal la dhageysiiyey ma aha kan wiilkaas! Waxaan ka wadnnaa cod beenabuurkaas oo kale ah baa la dhageysiiyey! PIS Puntland baa soo dirtay sh. Axmed C/Samad iyo Fu’aad Afloow si sh. Umal loo maqashiiyo cajalka dabadeedna ugu rido sheekh Xasaan!
« PreviousDHAGAYSO: Sheekh C/casiis Abuu Msucab Oo Ka Warbixiyey Guulaha Mujaahidiinta	Next »DHAGAYSO: Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed Oo Yiri Kornayl C/laahi Faray Maamulka Puntland Ayuu Dhaliil Usoo Jeediyey Iyo Gaalkacyo Oo Ciidan La Ciiraysa!.	19 Responses
Gundiid says:	July 31, 2012 at 5:03 am	Hal- su’aal shabaab iyo kuwa u jubeeysan…..Diinta in la fidiyi ayaa la isku ogaa ee ma eheey in kan Muslimka ah asagoo 5tiisa Waqiga tukanaya la gaaleeysiiyo……….Ku raaxeeysta Fitnadaad abuurteen………Mida kale Aniguse ma arag bog eey ictisamku leeyihiin oo eey ku aflagaadeeyaan dad ama shuyuukh lakinse SomaliMidnimo caay iyo been abuur ka bixi la dahay……..Sidaas kuwada hadaad u maleeyseen in eey dan islaam ku jirto
Reply	Mohamed says:	July 31, 2012 at 5:06 am	Nimankan Website qoraa ma inaay dadka Muslimka ah uun ka sheekeeyaan baa?
Reply	nuux says:	July 31, 2012 at 5:07 am	walaaleyaal anigu wax aan ku hadlaba garan maayo. afkiibaa juuqda gabay ayaan maqli jiray. wax aan ku hadlo garan maayo. lianna ninkan umal la leeyahay wadaadnimadana sheeganaya thulmiga uu wado iyo waxa uu walaaqanayo waxa ay u egtahay in musiibo iyo guuldarro xag alle ka timaada uu dalbanayo oo nimcada alle siiyay uu kibir iyo islawayni ka qaaday. cajiibka cajiibkiisa!!!!!
Reply	nur says:	July 31, 2012 at 5:34 am	!!!! To Somalimidnimo walalayal codkasa maheysen mise hada ayu inisogaray??horta Wilkas mujahidinta ayukamid aha lakin asaga shekha madilin lakin ninki dilay dr axmad iminka maraxeysanayo oo ama xabsi ayu kujira ama qabri
Reply	Gor-Gor says:	July 31, 2012 at 5:44 am	Umal marada ka dhacday in la asturana ma ogala daaya haqaa wanaadee, dadka markay wax been ah usheegayso wax been u eg baa lasheegaa dilka shiikhana beec ayad ka dhigteen markii sumcadina hoos udhacdaba ictisaamoow dilka shiikha kor ugu soo qaadaan, tan kale umul wa namaam dadku isku diraa wuuna ku farxaa awlna wuu nooga digi jiray, umul waa cabdi diinaar iyo sharaf raadis. Wadaad xumaday waa larki jiray lakin wadad sidan xumaday waligeed lama sheegin sheegin caruurteenan waxan ugu sheekeyn doonaa waxaa jiri jiray culimo diintii ka doortay shilimiid yaroo biyo cabaalah, dadkay iibsan jireen siday lacag u helaan dadkay isku diri jireen siday sharaf u helaan gaaladay dawarsan jireen siday carab dhaqaal uhelaan, diintii qarin jireen si aaminad uhelaan, waxay ahaayeen daacuunkii qarnigii aan soo dhaafnay ilmow mawaxad rabtaan inad ictisaam oo kale noqataan, mayay maya maya aabe, ok axsantum.
Reply	abukar says:	July 31, 2012 at 5:45 am	asc codsi walaalaha golaha b.islamka waxaan kacodsanayaa ama cid kasta ee aqoon u leh sida loo habeeyo cajaloyinka in muxaadarada sheekh xasaan iyo mida umal loo habeeyo sida mida abuu yaasir almaqdishi lasoo hormarsiiyo codka umal oo been abuur sameynaya kadibna sheekh xasaan oo kajawaabaya been abuurkaas waa iga codsi walaalayaal dadka caamada ah saas ayey wax ku fahmaan
Reply	Abu somali says:	July 31, 2012 at 6:29 am	Propability warkina la isku halen karo wa 0.0001 maxa yelay waxa tihin dad ay beentu cado iyo dhaqan u noqotay o dinlawayal ah kolay ciil iyo caro wad qabtin e caradina ku dhinta
Reply	Guhaad says:	July 31, 2012 at 6:39 am	UMALOOW Wallee Wxd sidii RITI qoodh ah jiriqsataba MAANTA DULLI iyo WAJI-GABAX iyo inaad KANIISADAHA DIFAACDO AYAA KUU DAMBEESEY….
FG : qofka daneynaya inuu ogaado UMAL isbadalkiisa iyo mesha aafadu kaga dhacday HA DHAGEYSTO TAFSIRKÍSA suratul-baqarah, aayadda 159-160 WXA KUUSOO BAXAYA WXA DADKA LOOGU SALLIDAY ee loo wada habaarayo
Reply	Ata-turki says:	July 31, 2012 at 7:01 am	Umal wuxuu noqdaba maanta kowaanka ayuu saaran yahay laakin ogaada nin waliba oo caalim noqdaa waa mdi aan ka suulin in laga helo hadalo aad moodo in ay isburinayaan laakin marka aad garashadeyda gaarto aysan wax is burin ah aysan kaaga soo ifbaxaynin walow ay dadka caadiga kuu arki karaan in uu qofkaasi noqday “Contraversial”
Dabcan waadigan umul waa looga horeeyey mana noqon doono caalimkii ugu dambeeyey ee shalay maanta noqda ee inta aynan biraynin aynu ka fiirsano oo yeesan dhicin in qeybo kamid ah raga kawaanka saarayo in baritoolana ay xaalad sidaa ah lasoo daristo oo la garan waayo qaab loogu garaabo.
Umul in uu Fatwooyin jihaadi ah ka bixin jiray Islii ma aha mid ka daboolan umada laakin mar ahaantaasi ma ahayn nin la oran karay wuu qaan gaaray marka laga fiirayo soo dhufashada meerayaasha nolosha kala hagto ee Ibni’aadam waliba uu mar qura nolashiisa si lama filaan ah ugu soo baraarugo.
Umul waxaan qabaa in maanta uu ku dhashay baraarug nololeed oo ka dhex baxsan catifada ka dhaxeeyso aadanaha laakin ay ku adagtahay in uu usoo bandhigo ardaydiisa maxaayeelay waa garasho ka weyn garasho oo qofna ku dhicin in uu luuqad ahaan kusoo gudbiyo laakinse aysan ahayn mid ka qarsoon uurkiisa.
Umul waxaan qabaa in si taxadar leh loo dhagaysto oo aan lagu cabirin astaamihiisii hore ee garashada mise aqoontiisa daahirka ahayd aynu dhamaan la wada socon jirnay .
Sheikhu waxaan qabaa in fursad aynu siino si aynu uga war dhuuxno uguna dhaxalno cilmiga kusoo naaxay ee aan la argatida ahayn wixii hore ee lagu yaqiinay.
Reply	Wanaagjecloow says:	July 31, 2012 at 7:35 am	Umal haka xaxaabiyo libax hordayo asaa isku sookacshaye kkkkkkkk hadana kkkkkkkk
Reply	Faysal says:	July 31, 2012 at 7:37 am	Ilahay ayaa xaqa cadeeyay umalow waxaad rabtay inad ceebayso walalkena al calamah sh. Xassan bal ilahay aduu ka so bixiyay ilahay ka cabso usolaabo diintada iyo alla ka cabsigi “”sh. Xasaan waxan waa imtixaan kasho sabar iyo thabaat qofka mu’minka waxaa la imtixaana hadba intu imaankisa la egyahay ilahay wixi shar ah oo ay wadaan ku wa cumalada gaalada ah ilahay hakaa badbadiyo shaykhanaa thabaat thabat thabat al tawakul ila laah
Reply	Yaasiin says:	July 31, 2012 at 7:57 am	Wa yaab war umal maxa helay waxa kudhacay miyunan rabi ka baqeyn war umal saan wuu karoona ma shibiliba duufsaday?
Ilahow shiikha noceymi
umal ceyb intaasa ugu filan isago shiikh ah in ash’haado ladir diinta ladirirsan warkoda xujeysto wa ceyb iyo fadexo umal kutimid
ilaheyse xaqa hatuso wa ninka kaliyah e ictisam ugu roon isagana saanbu udhaqmaa wax la arag!
Laka miirmaye rabow looya buurane heyraacin
Reply	daacad says:	July 31, 2012 at 8:17 am	shiiqa ninkii dilay anaa dilay ayuu leeyahay ee adinka maxaa idin wada
Reply	Samo Doon says:	July 31, 2012 at 9:15 am	Waxaan ahay “Eelaay” waxaan ka sii ahay “Ujuuraan” waligiin ma maqasheen. Ilaaheey baan ka baryayaa inuu ku kooba iyaga iyo kuwa la halmaala foolxummada iyo karaamo darida ay ummadda la doonayaan. Aakhiro iyo aduun Ilaaheey ha idin caddibo inta aad ku dhex jirtaan howlaha aad caddow ugu kaalmeeyneeysaan meel ka dhac lagu sameeyo diinta, dadka iyo dalka.
Reply	Samo Doon says:	July 31, 2012 at 9:40 am	Nuxurka sheekada ama waxa afka Ingiriiska lagu yiraahdo “moral story” ee lagala soo dhex bixi karo filimka koowaad waxa weeyeen xubnaha Al Shabaab waxa u badan dadka u dhashay qabiiilo aan maamuus buuran ku laheeyn Soomaalida dhexdeeda. Arrinkaasi ay doonayaan ineey naga dhaadhiciyaan qolooyinka duubay riwaayadan caqliga gaaban lagu dhisay waxa ay i xusuusisay sideey qureeyshi u yasi jirtay asxaabtii Nabiga (Naxarii iyo Nabad Galyo Korkiisa ha Ahaatee) oo ay ugu tilmaami jiraan ineey yihiin adoomo, fuqaro, iyo laga roonayaan aan ciso iyo sharaf ku dhex laheeyn umadda markaa jirtay. Waa tabtii oo aan la barxin, Subxaanallaah. Ruuxii wax garanaya ayey sheekadani ugu filan tahay cibriqaadasho. Taariikhda iyadaa dib isu qorta and sida ay yiraahdaan “History repeats itself”!
Reply	Kamadaale Dareenka Dadkiisa says:	July 31, 2012 at 12:05 pm	To cata tarraq!!!
Qabbaxakallaahu wa qabbaxa maa ji’ta bihi,,,
Magacad laso baxdey fircon baa kuu dhaantey ina la timado, adiga howshani kuma quseyso oo muslimin la marin habaabiyey baa la hanuuninaye maxad sidi duqsigi dalaq uso tiri?!
Kacaankan jihaadigA tareenkiisu wuu dhaqaaqey min muqdisho ilaa maali, ee madax yarow iska eeg yuusan ku marine.
Reply	Moxamed Cabdule Xasan says:	July 31, 2012 at 9:15 pm	KU: Ata-turki hada kahor baad waxaad tiri anigu calmaani baan ahay calmaanina macneheedu waa diinta waan kabaxay marka ninyahow waxaad tiri waxaan qabaa in umal uu baraarug nuloleed kudhashay marka anigu aad dadka 2 ilig dhexdood hadalka ugalabaxa ayaan kujiraa marka sasxiib ma waxaad kawadaa umal wuxuu noqday calmaani oo ilaahbuu dhab ahaan uwaayey oo wuxuu kuqancay in ilaah beenyahay? subxaanalah
taas hadaad umaleysay maxaad maladaada kudhistay mise ma cadeyn baad haysaa mise waa iska malo? adigase waxaan kuweydiiyey diinta wax makabaratay intaadan calmaaniyada kuqancin mise waad iska wareertay oo buugaag gaalo inta aqrisay baad iska cilmaaniyoowdey? jawaaw baan rabaa waxaan ogahay in ad oomantahay qofna biyo kama qatanaan karo asagoo ooman naftana waraaboyeherdo waa diinta, waxaan ogahay in ad qalbiga kawel weleysid in ad inta badan hurdada kuu gooyso in ad cidlo dareemeysid oo waxkasta oo ad iskumadadaaliso iyo maalkasta oo ad rog rogto in aad gubaneyso marka weydiiso caawinaad umadaan oslasmka ah si laguu gar gaaro
Reply	camaar says:	August 1, 2012 at 5:32 am	a.s.c walalayal waxan kaxumahay nimanka websitekan qora qaabkay udhaqman cajiib anigu wali ma arag culumo lacayo oo guul lagugaro takale waxad qorten umal asaga ufadwoonjiray itixadki somaligalbed oo jihaad sheganjiray waxadna sarten? Waxa mesha kacad inaydanba cidna u aqonsanayn jihad idinka moye cajiib takale sheekh kasta oo muxadareya waxad dhahdan wuqalday marka laga rebo culumadina oo yaa saxan marka wa su?ale
Reply	abu subeer says:	August 2, 2012 at 1:09 am	umadan aad fidmada aad dhex dhigayso musheekhdeediina aad iska horkeenayso dab hurayana aad gaas ku shubayso bilaahi caleel iska daa